SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikongo Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tatar Telugu Thai Tigrinya Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese
‘Mwari ane hanya neni here?’ Kana wakambozvibvunza mubvunzo iwoyo, hausiwe woga. Vazhinji vedu takambowirwa nenhamo nematambudziko, uye dzimwe nguva tinombonetseka kuti Musiki wezvinhu zvose anombotifungawo here? Tinoda kuziva kuti, Jehovha Mwari ane hanya nomumwe nomumwe wedu here? Paaiva pasi pano, Jesu munhu anonyatsoziva Jehovha, akataura muenzaniso unoratidza mhinduro inonyevenutsa mwoyo.
Achishandisa muenzaniso woupenyu hwomufudzi anenge achitarisira makwai ake, Jesu akati: “Kana mumwe munhu akava nemakwai zana uye rimwe rawo rikarasika, haangasiyi makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe mumakomo akaenda kunotsvaka rarasika racho here? Kana akariwana, chokwadi ndinokuudzai, anofara kwazvo pamusoro paro kupfuura pamusoro pemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe asina kurasika. Saizvozvowo hachisi chinhu chinodiwa naBaba vangu vari kudenga kuti mumwe wevaduku ava aparare.” (Mateu 18:12-14) Ngationei matauriro akaita Jesu nezvokuti Jehovha ane hanya sei nomumwe nomumwe anomunamata.
Mufudzi aiziva kuti aifanira kutarisira gwai rimwe nerimwe. Kana gwai rimwe chete rikarasika, aiziva kuti nderipi racho. Aiziva gwai rimwe nerimwe nezita raainge aripa. (Johani 10:3) Mufudzi aiva nehanya uyu akanga asingazorori kusvikira gwai rainge rarasika rava pamwe chete nemamwe makwai. Paainoritsvaka, akanga asingasiyi mamwe 99 ari pangozi. Vafudzi vaiwanzogara pamwe chete uye vairega makwai avo achivhengana. * Saka mufudzi aienda kunotsvaka rainge rarasika aimbosiyira vamwe vafudzi mamwe acho kuti vaatarisire. Paairiwana risina kukuvara, mufudzi uyu aifara chaizvo. Aizoisa gwai iri rainge rava kutya pamapfudzi oenda naro kune mamwe makwai kusina ngozi uye kwakachengeteka.—Ruka 15:5, 6.
Ava kutaura zvinoreva muenzaniso uyu, Jesu akati Mwari haadi kuti “mumwe wevaduku ava aparare.” Izvi zvisati zvaitika, Jesu akanga amboyambira vadzidzi vake nezvokugumbura ‘mumwe wevaduku ava vanotenda maari.’ (Mateu 18:6) Saka, muenzaniso waJesu unotidzidzisei nezvaJehovha? Iye Mufudzi ane hanya zvikuru negwai rake rimwe nerimwe, kusanganisira “vaduku,” vaya vanotarisirwa pasi nenyika. Chokwadi, mumaziso aMwari mumwe nomumwe wevanamati vake anokosha uye anodiwa.
Kana uchida kuva nechokwadi chokuti unokosha kuna Mwari, wadii kudzidza zvakawanda nezvoMufudzi Mukuru, Jehovha Mwari, uye kuti ungaramba uchiswedera sei pedyo naye? Kana ukadaro, unogona kuva nechivimbo chakafanana nechomuapostora Petro, uyo pasina mubvunzo akazvinzwira muenzaniso waJesu wegwai rakarasika. Petro akanyora kuti: ‘Kandai kuzvidya mwoyo kwenyu kwose pana Mwari, nokuti iye ane hanya nemi.’—1 Petro 5:7.
^ ndima 3 Kuparadzanisa mapoka emakwai aya kwakanga kusinganetsi, nokuti gwai rimwe nerimwe raiziva inzwi romufudzi waro.—Johani 10:4.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mufudzi Ane Hanya Newe